Showing १-१० of ३३५ items.
धरान । फिल्म उद्योगमा नदेखिए पनि बलिउड स्टार जेकि श्राफ तथा टाइगर श्राफकी बहिनी कृष्णा लाइमलाइटमा आउने गरेकी छन् । उनी विभिन्न हर्कतका कारण लाइमलाइट सधैजसो चर्चा हुने गरेको छ । अहिले कोरोना कारण विश्वभर नै लकडाउन छ । सबैजसो घरमै दिन बिताइरहेका छन् । बलिउड सेलिब्रेटीहरू पनि उसैगरी घरमै कैद छन् । यो बेलामा उनीहरूले गरेको विभिन्न हर्कतहरूलाई आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै फ्यानहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गरिरहेका छन् । यही क्रममा कृष्णाले पनि आफ्ना बोल्ड तस्बिरहरू सार्वजनिक गरेकी छन् । केही समयअघि प्रेमबाट विछोडिएकी कृष्णाले आफ्नो बोल्डलुक तस्बिर इन्स्टाग्राममा सेयर गरेकी हुन् । आफूलाई निकै फिट
धरान । बलिउड फिल्म उद्योगमा केही यस्ता फिल्महरू छन्, जुन फिल्म हालसम्म पनि रिलिज हुन सकेको छैन । फिल्म रिलिज नहुनुमा विभिन्न कारणहरू रहेका छन् । बलिउडका स्टार हस्तीकै फिल्महरू अहिले पनि स्थगित रहेका छन् । कहिले रिलिज होला वा नहोला अहिले पनि भन्न सकिने अवस्था छैन । बलिउडका अग्रज हस्ती बिग बी अमिताभ बच्चनको ‘सोबाइट’ फिल्म अहिले पनि रिलिज हुन सकेको छैन । सुजित सिरकारको निर्देशनमा बनेको उक्त फिल्म रिलिज गर्नका लागि अमिताभ बच्चनले ट्वीटरमार्फत् आग्रह गरेका छन् । जुन फिल्ममा अमितामले २ वर्ष छायांकनमा बिताएका थिए । सलमान खान र सञ्जय दत्त अहिले पनि बलिउडका उस्तै स्टारमा गनिन्छन् । सलमानक
धरान । बलिउडका निखिल अडवाणीले निर्देशन गरेको ‘डी–डे’ फिल्मको ‘रिल’ कथा बलिउड अभिनेता इरफान खान र ऋषि कपुरको बास्तविक जीवनमा पनि मेल खाएको छ । सन् २०१३ मा रिलिज भएको थ्रीलर सस्पेन्स फिल्ममा इरफान खान मरेको केही समयपछि ऋषि कपुर पनि मारिएका छन् । यो फिल्मको दृष्य हेर्दा दर्शकहरूलाई इरफानप्रति जति साहनुभूति छ, त्यति ऋषिमा छैन । किनकि ऋषि आतङ्वादी समूहको नेतृत्व गर्छन् । जसले भारतका थुप्रै राज्यहरूमा बम ब्लाष्ट गराउनका लागि भूमिका खेलेका छन् । त्यसको उनी नेतृत्वकर्ता हुन् । इरफान भारतको खुफिया एजेन्सीका एक कर्मचारी हुन् । जो पाकिस्तानकाे कराचीमा बसेर ऋषि कपुरलाई पक्र
इरफानसँग जोडिएका ऋषि कपुरको नयाँ ट्विस्ट
धरान । बलिउड अभिनेता ऋषि कपुरसँग बुधबार दिवङ्गत अभिनेता इरफान खानसँग रिल लाइफमा गज्जबको अनुभव छ । त्यो के भने, डी–डे फिल्ममा ऋषि कपुर र इरफान ठीक विपरीत ध्रुवमा देखिएका छन् । भारतको खुफिया एजेन्सीमा काम गर्ने इरफान खुङ्खार डन ऋषिलाई भारत सकुसल ल्याउनका लागि पाकिस्तानमा खटिएका हुन्छन् । जसले भारतका थुप्रै क्षेत्रमा बम ब्लाष्ट गरेर सर्वसाधारणको हत्या गरेको हुन्छ । अातंकवादी भूमिकामा देखिएका ऋषिलाई लानका लागि खटिएका चारमध्येका इरफान अन्त्यमा ज्यान गुमाउन पुग्छन् । ऋषिलाई भने भारत ल्याइन्छ र मारिन्छ । हिन्दीको एउटा उखान ‘जैसी कर्नी, वैसी भर्नी’ झैं यो फिल्ममा इरफान र ऋषिको मृत
किन विवादमा तानिए सोनु निगम ?
धरान । तीन वर्षअघि गरेको सामाजिक सद्भाव खलबलिने ट्वीटका कारण गायक सोनु निगम अहिले पनि विवादमा तानिदै आएका छन् । सन् २०१७ मा उनले मुस्लिम समुदायप्रति लक्षित गर्दै गरेको ट्वीटका कारण उनी विवादमा तानिदै आएका हुन् । उनले ‘हरेक दिन बिहान मस्जीदमा ठूलो ध्वनिमा लगाइने धार्मिक प्रार्थनाले आफ्नो निद्रा भगाउने’ गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा सेयर गरेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए । त्यही ट्वीट पुनः रिट्वीट भएपछि उनी थप विवादमा मुछिएका हुन् । उनको ट्वीटलाई ‘इस्लाम धर्मविरुद्धको ट्वीट’ को संज्ञा दिँदै तीव्र आलोचना भएको छ । सोही कारण उनले केही समय ट्वीटरमा आफ्नो पोष्टसमेत सार्व
करिना कपुरले गरिन् घरमै बस्न आग्रह
धरान । कोरोनाभाइरसका कारण भारतमा पनि मृत्यु हुनेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । २८९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ८ हजार ४५३ जनामा संक्रमित भएको पुष्टि भइसकेको छ । बलिउडका केही कलाकारहरूलाई पनि कोरोना भएको पुष्टि भइसकेको छ । गायिका कनिका कपुरको चौथो पटकको परीक्षणमा पनि संक्रमित भएको पुष्टि भएको थियो । अहिले भारत सरकारले लकडाउनलाई थप दुई साताको लागि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ । यसअघि २१ दिनसम्म लकडाउन गरेको थियो । यसैबीच बलिउडका सेलिबे्रटीहरूले लकडाउनका बेला घरमै रहनका लागि सुझाव दिएका छन् । यसक्रममा बलिउडकी अभिनेत्री करिना कपुर खानले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्रामबाट एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै सबैला
धरान । बलिउड स्टार जैकी श्राफ तथा टाइगर श्राफकी बहिनी बलिउड उद्योगमा प्रवेश नगरे पनि विभिन्न कारण चर्चामा आइरहन्छिन् । टाइगरकी बहिनी कृष्णा श्राफ फिल्मी उद्योगभन्दा पर भए पनि सामाजिक सञ्जालभन्दा पर छैनन् । पछिल्लो समय प्रेमलीलाका कारण चर्चामा रहेका कृष्णाको जीवनमा खराब दिन शुरु भएको छ । ब्वाइफ्रेण्ड एबन हेम्ससँगको प्रेमिल तस्बिरहरू सार्वजनिक गरिरहेने जोडीमाथि पछिल्लो समय कसैको नजर परेको छ । कारण यी जोडीबीच अहिले ब्रेकअप भइसकेको खबर बाहिरिएको छ । केही दिनअघि मात्रै सामुन्द्रिक किनारमा खिचिएका ग्ल्यामरस तस्बिरका कारण यी जोडी खुबै चर्चामा थिए । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर र इन्स्टाग्राममा सार्वजनिक भ
कोरोना लकडाउनमा प्रियंकाद्वारा फ्यानलाई उपहार
धरान । अमेरिकन गायक निक जोनाससँग विहे गरेकी बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले हालसालै गरिएको फोटोसुटका तस्बिरहरू सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममार्फत् तस्बिरहरू सार्वजनिक गरेकी हुन् । ट्याटलर म्यागजिनका लागि खिचिएका सुन्दर तस्बिरहरू उनले सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनलाई उक्त म्यागजिनले कभर स्टोरीका लागि फोटोसुट गरेको थियो । यो तस्बिर कोरोनाभाइरसको संक्रमन हुनुअघि खिचिएको हो । पछिल्लो समय प्रियंका युनिसेफको च्यारिटेबल कार्यक्रममा व्यस्त छिन् । त्यसो त विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि उनलाई कोरोनाभाइरसको जोखिमबाट बच्नका लागि सन्देशका रूपमा काम गर्न सद्भावना दूतका रूपमा मनोनयन गर
धरान । बलिउड स्टार अजय देवगनले आफ्नो ५१ औं जन्मदिन सेलिब्रेट गरेका छन् । देवगनले बिहीबार परिवारका साथमा आफ्नो जन्मदिन सेलिब्रेट गरेका हुन् । उनले बलिउड नायिका तथा पत्नी काजोल, छोरी न्यासा र युगको साथमा देखिएका छन् । बलिउड उद्योगमा सफल नायकको रूपमा रहेका अजयले फिल्म अलवा आफ्नो परिवारलाई अधिकांस सयम दिने गरेका छन् । छोराछोरी र काजोलका साथमा अधिकांस समय देखिने उनले फिल्मी उद्योगबाट छुट्टी पाउने बित्तिकै परिवारका साथमा घुम्ने गरेका छन् । उनले छोरी र छोरालाई पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा उपस्थित गराउने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा छोरी न्यासालाई सपिङमा पनि लग्ने गरेका छन् । बलिउड उद्योगमा निकै सफल
टाइगरकी बहिनीको बोल्ड रूप (तस्बिरसहित)
धरान । टाइगर श्रापकी बहिनी कृष्णा श्राप बलिउड उद्योगमा छैनन् । तर, उनी सामाजिक सञ्जालमा अति नै व्यस्त मानिन्छिन् । सामाजिक सञ्जालमा केही समय अगाडि खिचिएको कालो बिकनीको तस्बिर सार्वजनिक गरेकी छन् । समुन्द्रको विच तथा स्विमिङ पुलमा खिचिएको तस्बिरले फ्यानको ध्यान तानेको छ । निकै नै बोल्ड तस्बिर सार्वजनिक गरेकी उनीसँग ब्वाइफ्रेण्डको साथमा छन् । कृष्णा प्रेमी इबान हाम्सको साथमा समुन्द्र किनारमा देखिएकी छन् । शरीरभरि ट्याटु खोपेकी कृष्णा निकै हट देखिएकी छन् । उनले अधिकांस समय प्रेमीको साथमा रहेको फोटो तथा भिडियो सार्वजनिक गर्ने गरेकी छन् ।